Ngo yokudweba isiko Ukrainian ngasinda njalo Baroque izinyathelo Rococo futhi classic. Lokhu kunomthelela isivele izingane ezimbili ekumeni 1652 B. Khmelnitsky, uThimothewu Rosand. Nokho-Ukrainian Umdwebo isitayela kokuqala zahlukahlukene kakhulu futhi ukungafani skill.
isiko Ukraine engxenyeni yesibili le-17 futhi ekuqaleni kwekhulu le-18
Iningi ekumeni esisemthethweni (parsuna) Cossack Colonel owasinda, eyabhalwa izingcweti Cossacks zendawo, nokho, yena, bakwazi ukudlulisela kwemizwa kanye uhlamvu kuvezwa abadala. Mayelana Cossack ngobuqhawe abadwebi namaqiniso uPawulu wabhala Aleppo phakathi nekhulu le-17.
Kuze kube manje, ngeshwa, ifinyelele yingxenye encane kuphela imidwebo, okwadala abaculi Ukrainian kwekhulu le-18. Engxenyeni kwekhulu le-17 yesibili. Kuye kwakha isikole isithonjana abadwebi. Izibonelo edume kunazo kukhona zabalingiswa kweNyuka Cathedral kanye zintathu Gate Church Kyïv-Pechersk Lavra, kokuba ethambile, iyashintsha iyaphupha ibe indlela yokubhala. Ukwanelisa inkanuko laphetha imigqa bushelelezi usethe okunobudlova eziningana isimo melancholic, bezama ukusekela ubungqabavu sengqondo. Nokho, izigcawu amadlingozi ezifana "Ukuphuma abathengisi ethempelini", futhi ikakhulukazi endaweni yesehlakalo izifiso, amisiwe ukuze uthumele okuqinisekile okuhambisanayo voltage enobudlova zeziyaluyalu. Nokuboniswe nemidwebo sibalo waphefumulela impilo ngokomzimba nangokwengqondo, ukunyakaza kwabo balahlekelwa konke ukuzibamba futhi ngokuvamile wagcizelela kwemizwelo ephakeme.
Ngu Kiev-Pechersk art studio iba ezisohlwini lwezincwadi zeBhayibheli, umuntu oyisibonelo kuzo zonke ezinye izingxenye Ukraine.
Isici Umdwebo ingxenye yethempeli iba kuyilapho okuthiwa portrait ktitorskih. Churchwarden (ezilimi zomdabu - lo mdala) ngokuthi abasunguli, bona babasekeli babo kanye nabanakekeli yesonto elithile, kanye zesonto ekhona (i-yomkhandlu lesifunda). Ekhatsi Kiev amasonto ababheki izindaba zawo zazingcono kakhulu. Ngo-altare Church of the Dormition Kiev-Pechersk Lavra ukuze acekele phansi izibalo kwalo ngokomlando 85 baboniswa ngo-1941 - kusukela izikhulu Kievan Rus phambi kukaPetru mina (kuyacaca ukuthi akuwona neze). Inviolable ukuboniswa wokwehlayo eziphezulu zesonto, kodwa eduze naleso sikhathi wake waphila, ekumeni ngokucace nakakhulu kwaba inkulumo kakhudlwana futhi ubuntu eyayigcwele ebusweni babo.
ubukhazikhazi Olumangalisayo wabe esengena Inkathi iconostasis isonto Baroque, lapho isithonjana yafakwa ezine, noma ngisho imigqa emihlanu. Isenzakalo esidume kunazo zonke ye lokusinda iconography Baroque zaloluhlobo le iconostasis yeSonto ngekusitwa nguMoya Longcwele Rohatyn, Galicia (maphakathi no-17 c.) Nebandla-shrine Hetman D. Apostol e Mhar (Engxenyeni yokuqala c 18.). Inani eliphakeme labamemezeli isithonjana-yokudweba Iyizeli Umdwebo kwekhulu le-17. khona Bohorodchany (Manyavsky) iconostasis, esiklanyelwe iminyaka 1698-1705. Jobe Kondzelevichem okuyinhloko. Lapha, entsha yakhiqizwa izigcawu bendabuko waseBhayibhelini. Lowo mdwebo bangempela siphile, egcwele Dynamics, babeze bagqoke izingubo zokulingisa wendawo.
Sisebancane impela ekwindla ka izakhi iconography we Rococo isitayela, okuyinto lihlotshaniswa wokusetshenziswa okusebenzayo abafundi Lavra art workshop njengoba isampula imidwebo, abazali zaseFrench Rococo Watteau futhi Boucher, okwethulwa albhamu yomfundi amaqoqo. ekumeni Rococo kuletha nje ngisahlose lokho okukhulu futhi Gallantry, unezela imininingwane encane sici, kukhona fashion ukuba abantu babulawelwe kuzo abesifazane parsuna.
Ukuthuthukiswa art classical engxenyeni kwekhulu le-17 yesibili
Engxenyeni kwekhulu le-17 yesibili athuthukile zethusi oqoshiwe. ukuthuthukiswa Graverstva ezenzeka mayelana obuseduze udaba iziphakamiso umfundi, izidingo ukuphrinta, kanye inkhulumo oda. Nokho, phakathi imisebenzi Tarasevich abafowethu nozakwabo kamuva zingatholakala hhayi kuphela izingoma zikanokusho engokomfanekiso kwezwe nokwenkolo, kodwa futhi enengqondo graverskie imidwebo ebukeka, zonyaka nomsebenzi wezolimo. Ngo 1753 Empress Elizabeth wakhipha isimemezelo: guys amathathu kusukela Ukrainian enkantolo yesonto, okuyinto elahlekile amavoti cast ku eziqanjiwe ezingokwesayensi. La madoda kwakufanele abaculi Ukrainian esizayo owaziwa uCyril Golovachevsky, u-Ivan, u-Anton Sabluchok Losenko. Ngamunye wabo edlale indima enkulu ekuthuthukiseni art zakudala.
imfundo Art e-Ukraine engxenyeni 19 yesibili - ekuqaleni kwekhulu lama-20
Usizo lwabenza imisenenzi ukulungiselela kwezobuciko futhi zokudala abaculi Ukrainian ekhulwini XIX senzeka ngesikhathi Petersburg Academy Wezobuciko ethandwa ngesikhathi European izikole ephakeme ubuciko, lapho ukugcizelela wabekwa classicism zezemfundo. Ngaphansi imigomo sobuhle bayo, ke kwadingeka ikhono ukwakha ukumelana ukuthuthukiswa kwezobuciko Ukraine, ukwakha igebe phakathi ethandwa futhi "ahlukile" ubuciko.
Kuhle Art imidwebo abaculi Ukrainian kwekhulu le-19 bethula ivela ngemuva zezemfundo, futhi ngokuyinhloko Shevchenko, bese naye Napoleon Buyalsky Maria Raevskaya-Ivanov, uNicholas Aleksandr Muravevy, IIya Repin, et al., Ubani wafuna ukudala esikoleni kazwelonke we ubuciko . Centre zokuthuthukiswa Impucuko futhi kwezobuciko kwaba Kiev. Ngemva kokuqala kumiswa unomphela yobuciko ezikoleni. Kiev umdwebo esikoleni kwaba omunye izikhungo art lokuqala, odlale indima ebalulekile ekuthuthukiseni ezobuciko e-Ukraine. Ngezinye izikhathi ezahlukene safunda Levitan, Vrubel, Serov, K. Krizhitsky, S. Yaremich njll esikoleni wathola kokuqala art imfundo abaculi abaziwayo :. G. Dyachenko, Murashko, Kostenko, I. Izhakevich, G. Svetlitsky, u-Alberto eMoravia.
izikole Art ukunikeza uqeqesho olunzulu ukudala imisebenzi yobuciko. Lapho isikhungo Museum lalibuye eyasungulwa, okuyinto wathola imidwebo ehlukahlukene kanye nemidwebo ye Repin, Kramskoy, Shishkin, Perov, Aivazovsky, Myasoedova, Savitsky, Orlovsky nabanye. Othisha School ukusebenzisa izindlela ezintsha nezidingo ezisekelwe babebhapathiza ayezikhuluma nemvelo, ukugujwa esiqinile isimiso "kusukela ukukhanya - complex ngaphezulu", ukuqinisekisa indlela ngamunye, inhlanganisela organic sokulungiselela olukhethekile kanye nalolo olwejwayelekile ezemfundo, okungukuthi, ugxile anda ukuthuthukiswa olunzulu ubuciko imfundo.
Inhlangano wasiza M. Murashko School UProfesa Pavlov, a sokuma abadumile Russian PP Semenov-Tyan Shani, kanye ngalendoda wendawo W. Tarnowski futhi Tereshchenko. Abanolwazi othisha esikoleni ngezikhathi ezahlukahlukene babe M. Vrubel, I. Seleznev, V. Fabricius, Kostenko et al. M. Murashko School yayikhona kuze 1901, ukuze abafundi babe nethuba ukuthuthukisa amathalente abo zemvelo, bese uthola kwezobuciko imfundo. Abafundi babe nekusasa art Academy abaculi Ukrainian eyaziwa Volokidin P., P. Aleshin, M. Verbitsky, V.Zabolotnyi, Rykov, F. Krichevsky, C. Trofimenko Shovkunenko nabanye. Imfundo Art e-Ukraine ngo-engxenyeni 19- yesibili th - kuka-20 Art th. Lalimelela izikole ukuthi yayiseKhesariya Odessa, Kiev and laseKharkov.
art Ukraine 19 ngasekupheleni - ekuqaleni kwelama-20
indawo ikakhulukazi letigcamile kulesimo art Ukraine kungokwalabo Shevchenko, okwathi ngo-1844 iziqu Petersburg Academy of Arts, kwakukhona lapho umfundi ka Karl Bryullov, umbhali wencwadi Umdwebo abadumile 'Izinsuku Zokugcina yasePompeii. " Shevchenko wadala uchungechunge zabalingiswa ongumlimi ukuphila ( "Gypsy inhlanhla", "Nkosikazi", "ongumlimi Umndeni" nokunye. D.). ifa asankondlo kwezobuciko Shevchenko yaba nethonya elikhulu ekuthuthukiseni isiko Ukraine futhi art ethile. Kuye kuchazwe orientation entandweni yeningi, okuyinto ngokucacile umsebenzi abathweswe iziqu Zhemchuzhnikova L. futhi K. Trutovsky Petersburg Academy of Arts. Konstantin Trutovsky futhi waziwa ngokuba imifanekiso yakhe ngoba imisebenzi Gogol, Shevchenko, Marko Vovchok, njengoba balithumba biography umculi Ukraine Taras Shevchenko.
Esikhathini esizayo, master wabelane imibono eziphambili wadala ngo-1870, "Association of Okuhambayo Art Imibukiso" kanye nabaholi bayo I. Kramskoy, Surikov, Repin, V. Perov. Ukuthatha isibonelo "Wanderers" Russian, abaculi Ukrainian wafuna emsebenzini wakhe ukusebenzisa ulimi namaqiniso kwezobuciko ukuthi uyaqonda abantu, nokubonisa imidwebo yakhe izakhamuzi emadolobheni ahlukene. Ikakhulu, wadalwa "Society of Abaculi South Russian" e Odessa, okuyinto imatasa ibhizinisi embukisweni.
ubuhle yobuciko Nokubhekana Namaqiniso okusezingeni eliphezulu esivela imidwebo Nikolaya Pimonenko. Owaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe "Ukubona ukubuthela", "haymaking", "izimbangi", "matchmakers." Ngo uhlobo zomlando wabonisa ithalente lakhe Murashko. He is nombhali Umdwebo adumile "Umngcwabo Koshevogo" ngoba unendima eyinhloko ophakamise Staritskiy. Ngo landscape imidwebo yabonisa ithalente okukhulu Sergei Vasilkovsky, umsebenzi wabo esihlobene Kharkiv esifundeni. Wavula Umdwebo Ukrainian eYurophu, lapho ilungelo ngemidwebo yakhe e-Paris Salon "awahlelanga". Isenzakalo eyingqayizivele emhlabeni yobuciko waqala seascapes seascape umdwebi Ivan Aivazovsky. umphumela okungenakuqhathaniswa unyezi imakwe Umdwebo "Ebusuku ku Dnieper" Arkhip Kuindzhi. amakhosi Omkhulu landscape imidwebo babe abaculi Ukrainian kwekhulu le-19: S. Svetoslavsky, K. Kostandi, V. Orlov, I. Pokhitonov.
Ilokhu walondoloza ubuhlobo baso Ukraine, IIya Repin, owazalelwa e-Chuguev e Slobozhanschyna. Phakathi imisebenzi eminingi wenkosi enkulu linendawo ekhethekile, imidwebo yakhe "The Cossacks ubhala incwadi ukuze Sultan." Ngenxa yalesi indima umabhalane Cossack kuboniswe maphakathi ngendwangu, umculi ezibangelwa umngane wakhe Dmitriy Ivanovich Yavornitsky, ngubani wanikezela ukuphila kwakhe Ngokufunda umlando we Cossacks futhi okuthiwa i ngu Nestor Zaporizhzhya Sich. Ataman Ivan Sirko in umdwebo okubonisa Jikelele Mikhail Dragomirov.
Galicia umphefumulo kazwelonke ukuphila kwezobuciko kwaba umculi abanethalente (lyric landscape ne portrait), Ivan Trush, indodana Dragomanova. He is kumbhali ekumeni lezinombolo eliqavile isiko Ukrainian Franko, V. Stefanik, Lysenko nabanye.
Ngakho, bonke ekuthuthukiseni impucuko Ukraine ezenzeka mayelana obuseduze isiko okuqhubekayo abantu Russian.
Ukudweba kule 30s yekhulu lama-20
Eminyakeni 30 abaculi Ukrainian baqhubeka ukuthuthukisa ezindaweni ezahlukene umcabango kwezobuciko. Classic imidwebo F. Krichevsky Ukrainian ( "Abaphumelele Wrangell"), kanye landscape abadwebi Karp Trokhymenko ( "Abasebenzi Dnieper", "itheku Kiev" "Eminyakeni ngendlela enkulu", "Ekuseni epulazini") futhi Nicholas Burachek ( "Apple Izihlahla Blossom" "yasekwindla Golden", "Amafu isondela", "Indlela eya epulazini", "ibhonga nokukhala Dnieper ububanzi"), okuyinto masterfully ukukhiqiza kabusha isimo nemvelo, kuncike solar izici ukukhanyisa. impumelelo Obalulekile yobuciko Ukrainian kwalesi sikhathi abahlangene ukuthuthukiswa kwe-portrait uhlobo, emelelwa abaculi ezifana uPetru Volokidin ( "i-Portrait of Wife Umculi sika" "Portrait umculi Zoi Gayday"), Alex Shovkunenko ( ". Portrait wentombazanyana Nina"), uNikolai Glushchenko ( " Portrait of Romain Rolland "). Ngalesi sikhathi, lokusungula buyakhahlela Bilokur umculi Catherine (1900-1961). I element of Umdwebo wakhe - izimbali, akha Ukwakheka ubuhle ongavamile. Ukudweba "Izimbali kocingo", "Izimbali on isizinda blue", "Namanje Life ngezindlebe likakolweni imbiza" captivate inhlanganisela sangempela futhi kumnandi, umuzwa ngokuvumelana, ezihlukahlukene imibala, indlela obucayi ngokubulawa. Nge-kuya-Ukrainian eTranscarpathia ngo-1945 inani abaculi Ukrainian wajoyina Adalbert Erdelyi ( "I eyingoduso", "Owesifazane"), den bheka Gluck ( "abagawuli"), Fedor Manaylo ( "Ngo emadlelweni"). YaseTranscarpathia art esikoleni babe esivela isiko professional, ingcebo coloristic yosesho lwe-creative.
Zabalingiswa ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe
Omunye ehola Ukrainian Iyizeli Umdwebo wasala ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe isikhathi eside. Abaculi zibe ubuqhawe of amasosha, bokubanga emzabalazweni. Nokho, ngokubhala nefilosofi imidwebo: "Umhlengikazi" Askhat SAFARGALIN, "EGameni Life" Aleksandra Hmelnitskogo, "Len izimbali zawo ziwukudla" Vasily Gurin. Izingcweti eziningi baqhubeka ukuthuthukiswa yobuciko Ukrainian, bezama ukunikeza incazelo yabo lomuntu futhi umsebenzi Elikhulu Kobzar Mikhail Nkulunkulu "imicabango yami, imicabango" nokunye okunjalo. Ukuziqhenya isiko Ukrainian kwaba umsebenzi umculi Tatyana Yablonska (1917-2005). Ngisho esikhathini post-yimpi T. Yablonsky idale omunye imidwebo kakhulu isikhathi - "Isinkwa". Imidwebo ye enkathini yokuqala umculi - "Spring", "on Dnieper," "Umama" - eyenziwe okungcono isiko zezemfundo, egcwele ukunyakaza, umuzwa kanye nenkululeko enhle.
Ukudweba in the 50s yekhulu lama-20
Ngasekupheleni kwawo-50-yalolucwaningo e-Ukraine kuye kancane buthaka ingcindezi ngemibono phezu lokusungula abaculi. Nakuba kuhambisana 'isimiso okwangempela sezenhlalo "kwaba kuphoqelekile abaculi Soviet, ilinganiselwe ewumngcingo wandisa. Ngo zobuciko ikhuphukile uma kuqhathaniswa nenani lesikhathi yangaphambilini ye inkululeko enkulu ekukhethweni kuka labo esebenzisa ukuhumusha design kwezobuciko, ekuboneni ukuthi ungubani kazwelonke. Izingcweti eziningi Ukraine wafuna ukuhambisa kude ukuphila iqonde, aphendukela izithombe ongokomfanekiso, incazelo esankondlo zezwe lakudala. It poetizatsiya isibe omunye izitayela okuholela amafomu ahlukahlukene art. Le nkathi libhekene ukuphishekela izimpande kazwelonke. abaculi Ukrainian kwekhulu lama-20 waphendukela izithombe abanegama yomlando, isiko, futhi wafundelwa Folk ubuciko, amasiko. ukubaluleka Omkhulu isibe art omkhulukazi kanye zokuhlobisa, lapho search for nokucwaninga ngokugqamile. Phakathi original: DniproHES (Dnieper), 18 imisebenzi olugqamile Ukrainian omkhulukazi - namabala ingilazi triptych eNational University. Shevchenko, KaMose "Academy 17 v." I-Institute of Theoretical Physics, sekugcineni ingaphakathi Isigodlo Izingane kanye Youth ekhatsi Kiev, nokunye okunjalo.
Ukudweba ku 60s yekhulu lama-20
Ngo-1960 ekuseni umculi T. Yablonsky libhekisela Folk ubuciko, okwaholela ushintsho isitayela yayo ubuciko ( "Indian Summer", "Swans", "Umlobokazi '," Paper Izimbali "," Summer "). Lezi imidwebo esivela incazelo Planar, plasticity futhi zingabonisi ngalé bayaxoxa, isakhiwo umbala isilinganiso net imibala sonorous.
Ithinta lokusungula umculi yaseTranscarpathia Fedor Manaylo (1910-1978), lawo ngaphambi kwempi kwaba omunye the best abaculi European. Kube yiyo eshayeka kanzima ukusesha okudala umculi - ubunjalo Carpathians kanye izakhi zokuphila kazwelonke: .. "The Wedding", "ibhulakufesi", "ehlathini", "umzuzwana Solar," "Izintaba, izigodi," njll F. Manaylo kwaba ngumxhumanisi ku isethi movie Kusukela . Parajanov "Shadows yokhokho ukhohliwe", okuyinto, ngokusebenzisa igalelo lalo, isibe ekhululekile ikakhulukazi nokunemba ethnographic.
Umoya zokucwaninga, bayavumelana maqondana isiko kwamasiko European kuyahluka Lviv Art School. Uma isikole Ihambisana nemizwelo ZaseCarpathos olunothile ke ukuba Lviv - isitayela ingcaca ukusebenza, zesimanjemanje kanye nezobunhloli. abameleli Obvious lemikhakha ngesikhathi kukhona abaculi abadumile Ukraine: Zinovy Flint ( "Autumn", "Indian Summer", "Melodies of Bach," "Ukucabanga"), Lyubomir Medved (umjikelezo "Amapulazi kuqala ngokuhlanganyela e Lviv" triptych "I abathutha," " isikhathi fluidity "futhi m. p.). Izimo zethu zihluke kakhulu impumelelo in ubuciko steel usebenza lezi abaculi ku portrait uhlobo. Ekumeni lezinombolo kwamasiko L. Bear (Lesia Ukrainka S.Lyudkevych, Gogol, UTolstoy) yabakhanga ngendlela yasekuqaleni ngokubulawa, ezingalindelekile isakhiwo compositional, ukujula exacerbation okukhulu kwezithombe.
Umculi woqobo Valentin Zadorozhnyj (1921-1988) wasebenza izinhlobo ezahlukene - Umdwebo omkhulu futhi Iyizeli, ukudweba, zakhe isithombe, woodcarving. Umdwebi esetshenziswa ngobuhlakani uchazwe kabusha emasikweni engcono Folk ubuciko, ukuqonda ngokujulile izinto eziyisisekelo esikweni lesizwe: Umdwebo "Marusya Churay", "Dinner WamaSonto", "Chuchinskaya Orans", "Daily Bread", "futhi uyoba nendodana futhi umama ..." nezinye izintelezi ukugcwaliswa kanye umehluko lokhona emkhatsini imibala, imigqa bayaxoxa, isigqi lula, zokuhlobisa umsindo.
Umdwebi Ivana Marchuka usebenza usukela ezahlukene iziqondiso kwezobuciko nezindlela (kusuka okwangempela ukuba surrealism kanye Abstraction); izinhlobo (ekumeni, namathafa fi kokuqala efana amaphupho). Ngo imidwebo yakhe abangu okwakuthandelene isiko kanye emisha, yonke imikhiqizo abe ngokomoya lesisekelo 'yokuqhuma "ngokujulile," Izimbali Planet "," The Lost Umculo "," ukukhula "," Izwi womphefumulo wami! "," Ugongolo Kugcine "," ngenyanga unyukelé Dnieper " "ubusuku yanyanga zonke" nabanye. phakathi imisebenzi eminingi ngokuhlangenwe umculi kuqhakambisa mdwebo "the Awakening", okuyinto phakathi amakhambi izimbali wazibona ubuso owesifazana omuhle, wakhe mncane isandla okusobala. Lena - Ukraine, ubani ongenza kusuka ukulala esindayo eside.
Ukraine kufanele yokuziqhenya ngayo Izingcweti :. Mary Primachenko, uPraskovya Vlasenko Elizaveta Mironova, Ivan Skolozdra Tatiana Pato, Fedor Punk, njll Ngesikhathi, umculi French uPablo Picasso umxhwele umsebenzi M. Primachenko. Yena wadala umhlaba wakhe siqu ukuthi bahlala kuliphi izwe izidalwa kumnandi, izinhlamvu ezingu-temdzabu, izimbali sengathi benawo umphefumulo womuntu ( "The Wedding", "Holiday", "isixha", "Magpies - omhlophe emaceleni", "Umkhulu Three", "Wild Otter inyoni yambamba" "Ukusongela kwempi" kanye nabanye).
Ubuciko Ngasekupheleni kwekhulu lama-20
Isikhathi lokuma entsha emlandweni Ukrainian raznotvorcheskogo art angabhekwa ekupheleni kwekhulu lama-20. Ukwakheka geqe wadala isiko elisha futhi isimo zokudala e-Ukraine. Asisekho isimiso of ngokoqobo sezenhlalo, abaculi Ukrainian zaqala lenkululeko lokusungula. Yezobuciko, eyaqala ngesikhathi, yabonisa onekusasa lokudala yobuciko Ukrainian, ukwehlukana kwayo, khona kuwo ndlela ezahlukene, amafomu kanye esebenzisa inkulumo wokukhulelwa kwezobuciko. art Ukraine ngasekupheleni kwekhulu lama-20. Uye wabizwa ngokuthi "Wave entsha", wacosha Ukrainian avant-garde ukunyakaza 10-20-yalolucwaningo, kodwa sizoqhubeka ukuthuthukisa ke ngaphansi kwezimo ezintsha.
Modern abaculi Ukrainian futhi imidwebo yabo musa angena kohlaka isitayela esisodwa, isiqondiso noma indlela. isizukulwane amadala amakhosi uthanda bendabuko art enengqondo. Isibe Abstraction ezivamile (Tiberiy Silvashi, u-Aleksei Zhyvotkov uPetru Malyshko, Oleg Tistol Alexander Dubovik, u-Alexander Budnikov et al.). Nokho isici esiyinhloko yobuciko yesimanje Ukrainian luyinhlanganisela angokomfanekiso abstract amasu art (Viktor Ivanov, Vasily Khodakovsky Oleg ecacile, u-Andrey Bludov, uNikolai Butkovskiy Alexei Vladimirov et al.).
New Ukrainian Art
art Modern Ukrainian wathonywa yesimanjemanje Western. Surrealism (kusukela French "nadrealizm.") - omunye imisinga eyinhloko lobuciko avant-garde, ke wayedabuka naseFrance 20s. Ngokwe-umhlaziyi induna surrealism A. Breton, umgomo wakhe - ukuxazulula ukungqubuzana phakathi iphupho ngokoqobo. Izindlela ukufezekisa lokhu zahlukahlukene: abaculi Ukraine futhi imidwebo yabo ngokunemba enezithombe ukuboniswa izigcawu elingenalo logic, babutha izingcezwana eziyizinsalela wadala lezinto ajwayelekile futhi izidalwa eziyinqaba.
Op-art (art optical esifushanisiwe ngesiNgisi.) - I-art abstract, ethandwa in the West ku 60s. op-yebuciko zakhelwe imiphumela yeziphambeko, ukukhethwa womumo nemibala kuhloswe ukudala kuwutalagu ukunyakaza ngokukhululekile.
art Pop (esifushanisiwe ngesiNgisi. Popular art) owasungula e-United States naseBrithani, ngaphansi kwethonya isiko mass. Umthombo izithombe bakhe baye baba amahlaya ethandwa, ukukhangisa kanye nemikhiqizo yezimboni. yesehlakalo Single-esiteji ubuciko Umdwebo pop ngezinye izikhathi ugcizelela inqubo ukuthi sifana umphumela izithombe.
Conceptualism, ubuciko lomqondo (kusukela umqondo Latin, umqondo.) - isiqondiso eziholayo Western art 60s. Zokuqiniseka ngabameleli bayo, umbono (umqondo), ukwakha isisekelo sokuthethelelwa umsebenzi, inenani oludonsa futhi ibekwe ngaphezu kwe-amakhono. izindlela ezihlukahlukene ingasetshenziswa samuntu umqondo: imibhalo, amabalazwe, izithombe, amavidiyo kanye nokunye okufana nalokho.
Umkhiqizo kungase abonise gallery noma ukudalwa "phansi", isibonelo, landscape yemvelo, okuyinto ngezinye izikhathi iba ingxenye yayo. Ngale ndlela umculi kubukela embonweni ongokwesiko isimo abalobi yobuciko. Ukufakwa izakhi ngabanye ahlelwe isikhala predetermined ukwakha lonke kwezobuciko futhi ngokuvamile yakhelwe igalari ethize. Umsebenzi onjalo angeke sidluliselwe kwenye indawo, ngoba imvelo yayo kuyinto alinganayo ingxenye.
Ukusebenza (kusukela umqondo ngesiNgisi.) - buyinto kwezobuciko esihlobene ukudansa nokusebenza ezigcawugcawu. pop art ulimi amakhono futhi ngokuvamile sisetshenziswa kulowo msebenzi abaculi bakhe Ukrainian, uStepan Ryabchenko, u-Ilya Chichkan, Masha Shubina Marina Talyutto Ksenia Gnilitskaya, uVictor Melnychuk nabanye.
Assemblage - isingeniso wobuciko ka ngakuthathu izinto lenemaciniso abuye okuthiwa izinto ezitholakalayo - abavamile izinto zangamalanga. Ivela ikholaji - su, lapho ezicucwini zamaphepha, indwangu, njll awashintsheki phezu flat ... art Assemblage zehlisa ngu uPablo Picasso ngasekuqaleni 20 c., phakathi abaculi Ukrainian reception assemblage asetshenziswa kabanzi A. Archipenko, Ivan Ermilov, Baranov et al. Modern abaculi Ukrainian samanje kunqubo e-Ukraine, by Isifaniso ne West ibizwa ngokuthi inkathi postmodern (isb okuthunyelwe yesimanjemanje). Postmodernism e zobuciko okusikhumbuza izingcezwana eyinkimbinkimbi okuxubile izitayela langaphambilini, izitayela kanye ukuthambekela okungalungile, akusizi ngalutho ukubheka, okungenani, noma yiziphi izimpawu zokutheleleka yokuphelela. postmodernism Ukrainian ngokuvamile kuba ukuboleka noma ukusebenzisa umqondo womunye esisobala onobuhle Western.
Imibala iyashintsha iyaphupha ibe ibhalansi kanye nokuzwana umzimba nomphefumulo
Titian: isithombe kanye nencazelo
Udweba kanjani isinyathelo ihhashi ngesinyathelo: wesifunda elula
Floral Ukwakheka zokuhlobisa ngezandla zakhe
Amathangi awaziwe - okwangempela, ohlelekile futhi ekhululekile
Ekaterinburg, "Pinery": nezifo zengqondo emtholampilo. Incazelo Nezibuyekezo
"I ikhambi ukufa": abadlali kanye nezici
A borscht zakudala "eMoscow" - iresiphi kusukela kudala
MAZ amabhasi 103, 105, 107, 256: izici lobuchwepheshe imifanekiso
Inkantini ukuthi zivuleka? Kanjani ukwakha esifubeni ku nemigoqo?